စပိန်နိုင်ငံသည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကဏ္inတွင်မကောင်းသောဥပမာတစ်ခု | အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ
TomàsBigordà | | CO2 ကူးယူ, ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင်
မီ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ, အကြားပေါင်းစပ်အခြေအနေတစ်ခုလုံးစီးရီး စီးပွားရေး၊ လူ ဦး ရေလှုပ်ရှားမှု၊ ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုနှင့်နည်းပညာစီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ၊ လုပ်ငန်းခွင်သို့မဟုတ်စီးပွားရေးအမြတ်အစွန်းများအပြည့်အ ၀ လည်ပတ်နေသောစီးပွားရေးစွမ်းအင်အမြောက်အမြားကို ဖန်တီး၍ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစွမ်းအင်စနစ်အားယေဘူယျအားဖြင့်ပြောင်းလဲခြင်းကိုစတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကတွေး။ မရ၊, အသိအမှတ်ပြုဆုံးတံဆိပ်များထဲမှတစ်ခုပေါ်တွင် အခြေခံ၍ ထောက်ပံ့ခြင်းနှင့်လူမှုရေးအရလက်ခံခြင်း ... "ရေရှည်တည်တံ့မှု".
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအတိုင်းအတာအပေါ်နေစဉ် ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်များတပ်ဆင်ရာတွင်ဘီလီယံပေါင်းများစွာရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားသည် ၎င်းသည်သိသာထင်ရှားသည့်အကျိုးကျေးဇူးများအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အစီရင်ခံစာ၏အောက်ပါဇယားတွင်ကြည့်နိုင်သည် Ren21"ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ 2015 - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေအနေအစီရင်ခံစာ" ပြီးခဲ့သည့်ဒီဇင်ဘာလထုတ်ဝေခဲ့သည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်နှင့်လောင်စာ ဖွံ့ဖြိုးပြီးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများတွင် 2004-2014 အကြားကသိသိသာသာကြီးထွားလာခဲ့သည်။ ငါတို့သိတယ် Espana အဓိကအားဖြင့်လေကဏ္ sector ကြောင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်စွမ်းစွမ်းအားကို ဦး ဆောင်သောနိုင်ငံ ၇ ခုအနက် ၄ ခုတွင်တည်ရှိသည်။
အဖြစ်မှန်အတွက်ပေမယ့် ငါတို့မှာရှိတယ် "ကလပ်", ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃၊ ၂၀၁၄၊ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကဏ္sectorတွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်း။ ကျနော်တို့နေဆဲတူညီတဲ့ installed စွမ်းရည်ရှိသည်။ ဒါဟာအောက်ပါဂရပ်တွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည် အိုင်ရင်း(နိုင်ငံတကာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အေဂျင်စီ)
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ယခုအချိန်အထိ, ငါတို့စာဖတ်သူများအဘယ်သူအားမျှဒေတာများကအံ့အားသင့်လိမ့်မည်။ ကျနော်တို့သိပြီးသား ကျနော်တို့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကောင်းသောထုတ်လုပ်သူဖြစ်ကြသည် အကြောင်းပြချက်အမျိုးမျိုးကြောင့်ဖြစ်သည်။ အကျပ်အတည်းပြselfနာ၊ မိမိကိုယ်မိမိသုံးစွဲမှုဥပဒေများနှင့်အခြား "ဝှက်ထားသော" အချက်များဖြစ်နိုင်သည်။ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်အနည်းဆုံးပြောရလျှင်နောက်ထပ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများမပြုလုပ်ခဲ့ကြပါ။ သို့သော်… ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ကိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်စားသုံးမှုလိုအပ်မှုကြောင့်ရုပ်ကြွင်းလှည်းကိုဆွဲထုတ်မိလျှင်ဘာဖြစ်မည်နည်း။
1 စပိန်နှင့်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ 2015
2 CO2 ထုတ်လွှတ်မှုတိုးလာသောအခါဘာဖြစ်မည်နည်း
ဤသည်ကနေနောက်ဆုံးပေါ်အစီရင်ခံစာအဘယ်မှာရှိ စပိန်လျှပ်စစ်ကွန်ယက်၊ IBEX35 တွင်ဖော်ပြထားသောကုမ္ပဏီသည် ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့၏လျှပ်စစ်ဓာတ်အားလိုအပ်ချက်ကိုစပိန်နိုင်ငံတွင်မည်သို့လွှမ်းခြုံခဲ့ကြောင်းနှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၄ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါကပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနည်းပါးပြီးကျောက်မီးသွေးနှင့်ဓာတ်ငွေ့များများလွန်းသည်။
အစီရင်ခံစာက ... ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်သည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှုတွင်အဓိကအခန်းကဏ္ maintain မှပါ ၀ င်သော်လည်းယခင်နှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅ မှတ်ခန့်ကျဆင်းခဲ့သည်။ ရေအားလျှပ်စစ်နှင့်လေစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှုသည်ယခုနှစ်တွင် ၂၈.၂% နှင့် ၅% အထိကျဆင်းသွားသည်။ အသီးသီး% ။ ဖေဖော်ဝါရီနှင့်မေလများအတွင်းကျွန်းဆွယ်တွင်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားစုစုပေါင်းထုတ်လုပ်မှုတွင်လေစွမ်းအင်သည်နည်းပညာဖြစ်သည်ဟုမှတ်သားသင့်သည်။
ပြင်ပအကြောင်းအချက်များကြောင့်ရာသီဥတုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါ ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အတွက်စွမ်းအင်၀ ိပmaနာသည်ကျောက်ဖြစ်ရုပ်ြွကင်းစွမ်းအင်သုံးစွဲမှုကိုဆွဲထုတ်ရန်၊ တိုးမြှင့် CO2 ထုတ်လွှတ်မှု.
၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင် CO2 ထုတ်လွှတ်မှုပိုမိုရရှိခြင်းဖြင့်ကာဗွန်အခွင့်အရေးအတွက်ပိုမိုပေးဆပ်ရပါလိမ့်မည်။ ဘယ်လောက်ပါလဲ? ပုံအတိအကျနှင့်စားပွဲပေါ်မှာဒေတာနှင့်အတူ, ကျွန်ုပ်တို့သည်ခန့်မှန်းတွက်ချက်ခြင်းမဟုတ်ဘဲခန့်မှန်းတွက်ချက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
Greenpeace စပိန်အဆိုအရ: 2015 ။ နောက်ထပ်ယူရိုသန်း ၁၀၀ ကျော်ပေးရမယ် ကျောက်မီးသွေး (+ 14%) နှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ (+ 2%) ၏ကြီးမားသောဝင်ရောက်မှုကြောင့် CO22 တန်ချိန် 17 သန်းများအတွက်ကာဗွန်အခွင့်အရေးအတွက်။
နိုင်ငံ၏အဆိုအရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်နှင့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်အကြားတွင် အခွင့်အရေးများကိုဝယ်ယူရန်အတွက်သန်း ၈၀၀ ကျော်သုံးစွဲခဲ့သည် CO2 ၏။
ကာဗွန်ထုတ်လွှတ်မှု၏တန်ဖိုးကိုနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း El Economista သတင်းစာတွင်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးနိုင်သည်။ သူတို့၏စျေးနှုန်းများလည်းနှစ်စဉ်တိုးတက်သည်။
မည်သို့ပင်ငါတို့လိမ့်မည်ရှိမရှိ ဒီထက်ပိုသို့မဟုတ်ဒီထက်နည်းပေးဆောင် ကျွန်တော်တို့ရဲ့နားလည်မှုမှာဒီကိစ္စရဲ့တကယ့်ပြproblemနာကသန်းပေါင်းများစွာသောပိုလျှံသောထုတ်လွှတ်မှုပမာဏအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ပေးဆောင်နိုင်ခြင်းဖြစ်သည် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သော CO2 (၂၀၁၅ ခုနှစ်)အဘယ်သူမျှ ပြန်၍ မကြည့်ဝံ့။ ဤသန်းပေါင်းများစွာသောလူများအားပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် ၂၀၁၂၊ ၂၀၁၃ နှင့် ၂၀၁၄ တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနိုင်သည်။
ဒါကြောင့်, ၂၀၁၅ ခုနှစ်တွင်စွမ်းအင်ထောက်ပံ့မှုကို“ သန့်ရှင်းသော” စွမ်းအင်များနှင့်မနှစ်သက်ပါကကျွန်ုပ်တို့သည် ၂၀၁၆ နှင့် ၂၀၁၇ ကိုအတူတူပင်ကြိုတင်ခန့်မှန်းနိုင်သည်။။ ဖြစ်စေ၊ မဖြစ်စေကျွန်ုပ်တို့ကြုံတွေ့နေရသောရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကြောင့်သို့မဟုတ်လူ့အဖွဲ့အစည်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပိုမိုသုံးစွဲနေသည်ဟူသောအချက်ကြောင့်ဖြစ်စေ၊
ဒီနှစ်ပေမယ့် တစ် ဦး ဆိုနိုင်ပါတယ်စွမ်းအင်မူဝါဒမျက်နှာသာဖြစ်ပါတယ်PP နှင့်နိုင်ငံသားများ၏လှုပ်ရှားမှုများကိုထောက်ရှု။ ကျွန်ုပ်သံသယဖြစ်ရသောစွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသောရလဒ်သည်ရေတိုတွင်မဟုတ်ပါ။ ပန်းခြံအသစ်တစ်ခုသို့မဟုတ်နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဓာတ်အားပေးစက်ရုံအသစ်တစ်ခုသည်တစ်ရက်မှနောက်တစ်နေ့သို့လည်ပတ်မည့်စီမံကိန်းမဟုတ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အစိမ်းရောင်ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲ » ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်သောစွမ်းအင် » စပိန်နိုင်ငံ, ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲကဏ္sectorအတွက်မကောင်းတဲ့ဥပမာ
အဆောက်အ ဦး များတွင်စွမ်းအင်ထိရောက်မှုအတွက် Eco-ဆန်းသစ်တီထွင်မှု